International War News Journal UA-57981740-1
နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းများကို မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားပြီး တိကျ မှန်ကန် စုံလင်စွာဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Myanmar First online International War News Journal.
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာညချမ်းပါ ခင်ဗျာ။
စစ်ပွဲတွေ ရပ်တန့် ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သင်ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ၊ ဘာတွေပြောချင်လဲ - ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေများအား နိုင်ငံတကာ စစ်သတင်းဂျာနယ်မှ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ မသိခဲ့ကြလို့ ဖြစ်စေ၊ လစ်လျူရှု့ ခဲ့ကြလို့ ဖြစ်စေ ယခုအချိန်အခါတွင်တော့ ပါးစပ်များ ပိတ်၍ မနေသင့်တော့ပေ။
ယနေ့ ခေတ်ကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူများသည်လည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသင့်သည်။
မျက်နှာလွဲခံထားခဲ့ကြရသည့်၊ လစ်လျူရှု့ ခံခဲ့ကြရသည့်၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံခဲ့ကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမ မိဘ ဆွေမျိုးများအတွက် ယခု ဒီအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ တွေ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ပါဝင်ကူညီရန်သင့်ပေသည်။
ဆိတ်သုန် တိမ်မြုပ်နေ၍ ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ၄င်းတို့ ကိုယ်စား နေ့ စဉ် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အမှန်တရားများကို လူအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မီဒီယာ အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သတင်းများအား ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး သိရှိနားလည်စေရန် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်အားဖြင့် ကြိုးစားရန်မှာ ခက်ခဲလေ့ရှိပြီး စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အမှန်တရားဘက်မှ ရပ်တည် ပေးကြမည့် သူရဲကောင်း ပြည်သူများအား ကျန်ရှိနေသည့် ပြည်သူများက အမှန်တရားဘက်မှ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်၍ ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကူညီ ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
စစ်ပွဲများရပ်တန့် ကြပါစေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးများ တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေ။
‪Editor in Chief : AJAX
International War News Journal Group.
Posted by Aung Zin Linn No comments:
၀' ပြည်နယ်မှ တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ အစည်းအဝေးပွဲ
တနင်္လာနေ့ ညနေခင်းပိုင်း နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားသူပုန်များဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ က ၀'ဒေသ နယ်စပ်အနီးမှာ သီးသန့် ကျင်းပခဲ့ကျသောအစည်းအဝေးပွဲတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရန် စည်းဝေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်ဟု ၀ဒေသပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
The United Wa State Army (UWSA) ၀တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် စစ်တပ်ဟာဆိုရင် နယ်စပ်တစ်လျှောက်တွင် မူးယစ်ဆေးလမ်းကြောင်း အဖြစ်ယူဆရသော လျို့ ဝှက် လမ်းများအတွင်း ထောင်ချီသော လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ များကို နေရာချထား ကြပါတယ်။
အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အစည်းအဝေးပွဲကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေး အစည်းအဝေးပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းဟု မဆိုရသော်လည်း များစွာသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄င်းလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားသူပုန်များဟာ ယခုအစည်းအဝေးပွဲသည် ၄င်းတို့ ၏ ဒေသများနှင့်အတူ ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံး အတွက်အလွန်ပင် အထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းကို Ta'ang National Liberation Army (TNLA) မှ ဗိုလ်မှူးTar Pan La က AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအတူ ယခုအစည်းအဝေးပွဲကို မေလ ၆ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပါ ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
President Thein Sein has securedadraft deal with 16 rebel groups to end decades of fighting, described by the United Nations asa"historic and significant achievement".
The government wantsafull nationwide ceasefire before elections in November seen asatest of reforms after decades of military rule.
But skirmishes continue in Kachin state, whereaceasefire deal collapsed in 2011 soon after the end of junta rule.
Heavy fighting has also erupted in the Kokang regions of northern Shan state, causing tens of thousands to flee over the border into China and sparking alarm in Beijing.
The Kokang fighters, who poured back into Myanmar in February after being driven out by troops in 2009 and have fought with help from the TNLA, are not part of the nation's ceasefire talks, although they have been invited to the Wa meeting.
Bertil Lintner, author of several books on Myanmar and its ethnic minority regions, said the Wa talks wereaway for Beijing to "put pressure on the government".
"They do not want to lose influence in Burma," he told AFP, using the country's former name, adding that Beijing's sway had diminished under the new regime, which has sought to open the country to the world after decades of isolation.
He said the Wa receive their weapons from China and are thought to be sharing them with fighters in Kokang. Both ethnic groups previously fought the government as part of the Communist Party of Burma.
Myanmar government forces have become locked in protracted conflict with Kokang ethnic Chinese rebels despite the use of air strikes and heavy artillery.
"It isasign of weakness notasign of strength. Casualties have been extremely high," he said of the conflict.
The UWSA signedaceasefire with the country's military government back in 1989 and reiterated the deal in 2011.
Reporting and Editing by ‪#AJAX
Ref : Bangkok Post via AFP သတင်ဌာန / May 2015
Link : http://www.bangkokpost.com/news/asia/548519/myanmar-rebels-convene-in-wa-region
Your Company Here !
နောက်ဆုံးရ Update သတင်းများကို စာဖတ်ပရိသတ်များ ရယူနိုင်ရန် အတွက် Email ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Aung Zin Linn
" မြန်မာနိုင်ငံမှ Online မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ စစ်သတင်းများကို အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့် Facebook တွင် လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ "
" နိုင်ငံတကာစစ်သတင်းဂျာနယ်မှ ဖေါ်ပြသောသတင်းများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းဌာနကြီးများမှ ရယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ "
2015 Copyright by International War News Journal. Simple theme. Powered by Blogger.